Ụlọ ọrụ njikọ, Camlock njikọ, mejupụtara sooks - EVERNEW
ụlọ ọrụ njikọ
Chemical mejupụtara sooks
EVERNEW anwụrụ ụlọ ọrụ
Anyị nwere ndị nọ n'ala fọrọ n'ebe ọ bụla i nwere ụgbọ mmiri, ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri metụtara ọrụ. Netwọk anyị ike ya enweghị nsọtụ.
Ndenye n'ọdụ ụgbọ mmiri oku achọ ọsọ na arụmọrụ. Ebe ọ bụ na anyị aka n'elu 75 000 mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-akpọ a afọ, anyị maara otú ịbụ ezigbo onye na n'ọdụ ụgbọ mmiri.
N'agbanyeghị a ebu ọnụnọ 74 mba gburugburu ụwa, na n'elu 21 100 ọrụ, anyị ụlọ ọrụ na-agbakụ otu omenala.
CIXI EVERNEW anwụrụ ụlọ ọrụ CO., LTD e guzobere na 2010
dị na Cixi obodo, Zhejiang province.It bụ a mmepụta na ahịa nke ọgwa company.Our ụlọ ọrụ pụrụ iche na mmepụta nke elu - ọgwụgwụ Petrochemical mejupụtara sooks na ngwa ngwa couplings.
Plastic Camlock njikọ DC
Ọla kọpa Camlock njikọ D
Aluminum Camlock njikọ F
Cixi Evernew Pipe Industry Co., LTD. nwere ọtụtụ mmekọ: PetroChina, SINOPEC, BP, shei, OPW, PPG, Dixon na na. Anyị na-enye ndị ahịa na asọmpi ahịa, elu-edu ngwaahịa na elu-àgwà service.This bụ ebighi mgbaru ọsọ nke mgbe nile ọhụrụ nke EVERNEW.Our akụ na ụba na-abịa site innovat ...
Nke a na ụdị sooks nwere ike nọgidere na-enwe dị na ntuziaka nyere na saịtị a.
Mejupụtara sooks bụ a pụrụ iche sooks esịnede ọtụtụ n'ígwé nke pụrụ iche ihe, ẹkenịmde ọnụ n'etiti ihe n'ime na elu waya. Nke a na ụdị sooks bụ ka n'okpuru otu arụmọrụ parameters dị ka mgbe nile sooks. Nke a na ụdị sooks nwere ike nọgidere na-enwe dị na ntuziaka nyere na t ...
Anyị ụlọ ọrụ atụ ke Shanghai Chemical ngosi
-Enweta ihe ọmụma
Anyị ụlọ ọrụ na-ewebata elu uzu na akụrụngwa si Europe na designs.We imewe, rụpụta na ule ọtụtụ ndị mejupụtara hoses na camlock na echesinụ dị na mba ụkpụrụ (EN13765, EN13766, BS5842, BS3492, USA-A59326A)
Njikọ ọsọ ọsọ:
HX B-French ọkọlọtọ
Adress: NO.172 TANBEI ụzọ, SHIJIA n'obodo nta, na TIANYUAN obodo, CIXI OBODO, Zhejiang Province, CHINA.
Hydraulic njikọ, mejupụtara sooks, Mgbanwe High Pressure sooks, Fire-eguzogide ọgwụ sooks , 2sh 4sh 2sp 4sp Rubber sooks, Ndenye Elu njikọ,